Wararka Maanta: Khamiis, Sept 27, 2012-Bam Gacmeed sababay dhaawacyada dad shacab ah oo ciidammo ka tirsan dowaldda lagula beegsaday Isgoyska KM-4 ee Muqdsiho
Inkastoo aysan wax khasaare ah kasoo gaarin qaraxaas ciidamadii lagu weeraray ayaa haddana ciidamadu waxay markiiba fureen rasaas aanay cidina wax ku noqon; iyadoo ciidamadu ay qabqabteen dhowr qof oo qaarkiid markii dambe lasii daayay, halka kuwo kalena ay ciidamadu wateen.
"Qaraxu wuxuu ka dhashay bam lagu tuuray gaari ay ciidamada dowladdu wateen oo marayay isgoyska KM-4, waxaan arkay dhaawacyada ugu yaraan afar qof oo laba ka mid ah ay aad u daran yihiin," ayuu yiri Cali Muumin oo ah ganacsade ku sugnaa isgoyskaas.
Goobjoogayaal kale ayaa sheegay in haweeneyda ku dhaawacantay ay ahayd mid ka shaqeysata caanaha, uuna dhiig badan ka baxay ka hor intii aanay suurogelin in laga qaado halkaas si isbitaallada loo geeyo.
Isgoyska KM-4 oo ah mid aad u mashquul badan ayay noqonaysaa markii ugu horreysay oo qarax lagula beegsado ciidammo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya, iyadoo aanay jirin cid sheegatay inay mas'uul ka tahay weerarkaas.
Dowladda cusub ee Soomaaliya ayaa waxay u muuqataa mid la tacaalaysa xalaado ammaan-darro oo kusoo kordhaya Muqdisho, waxaana qaraxan bambaano uu kusoo beegmayaa iyadoo toddobaadkan horraantiisii ay qaraxyo dad badan dilay ka dhaceen Muqdisho.